mairie-antananarivo – Fivoriana niarahana tamin’ ny Care Internationale mikasika ny GRC (Gestion de Risque et Catastrophe)
Fivoriana niarahana tamin’ ny Care Internationale mikasika ny GRC (Gestion de Risque et Catastrophe)
auteur 24 octobra 2016 Commentaires fermés
Nanatanteraka fivoriana niaraka amin’ireo Fokontany 75 ato anatin’ny Boriboritany enina eto Antananarivo ny CARE International ny faha 19 Oktobra 2016 teny amin’ny Espace Country Club Ambohitrarahaba.
Tatitry ny “simulation”, na andrana ho fiomanana amin’ny fiavian’ ny fotoam- pahavaratra no nentina teo anivon’ireo Lehiben’ny Fokontany, 7 tamin’ireo 75 dia ao anatin’ny Boriboritany fahadimy avokoa (Ivandry, Isoavimasoandro, Amboditsiry, Morarano, Manjakaray II B, II D, II C).
Nozaraina “certificat” ireo Fokontany hita ho mendrika indrindra sady nahavita namerina ireo andrana araka ny tokony ho izy, isan’ireo ny Fokontany Ivandry, Amboditsiry, Ivandry, Manjakaray II C.
Nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny CARE Internationale fa raha tontosa an-tsakany sy an-davany, ary arahin’ireo eny anivon’ny Fokontany ny fampiofanana voarain’izy ireo dia tsy tokony hisy olana ny fiatrehana ny fiavian’ny orana eto Antananarivo Renivohitra. Koa manentana hatrany ny mponina izy ireo mba hanaraka ny toro- marika rehetra omen’ny Fokontany tsirairay avy.
AO ANATY » Fandriam-pahalemana